रेडियो कार्बन भनेको के हो ? ~ विज्ञान संसार
रेडियो कार्बन भनेको के हो ?
Posted by Om Bhandari On 12:34 PM
रेडियो कार्बन भन्नाले रेडियो विकिरण निकाल्ने कार्बन तत्व बुझिन्छ । रेडियो कार्वन साधारण कार्बनको आइसोटप (Isotope) हो । आइसोटप भन्नाले एउटै तत्वको फरक न्यूट्रोन संख्या भएको परमाणु भन्ने बुझिन्छ । जस्तो कि साधारण कार्बनको परमाणुको नाभिक (Nucleus) मा ६ वटा मात्र न्यूट्रोनहरू हुन्छन । यसको आइसोटप ( रेडियो कार्बन)मा ८ वटा न्यूट्रोनहरू रहेका हुन्छन । त्यसैले साधारण कार्बन परमाणुको भार (प्रोटोन र न्यूट्रोनको जोड) १२ रहेको छ भने रेडियो कार्बनको भार १४ (प्रोटोन ६ + न्यूट्रोन ८) रहेको छ । साधारण कर्बनलाई C12 लेखिन्छ भने रेडियो कार्बनलाई C14 लेखिन्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार अन्तरिक्षका टाढा टाढाका ठाँउहरूबाट पृथ्वीमा लगातार शक्तिशाली अन्तरिक्ष किरण (cosmic ray) हरू वर्षिरहेका छन् । ती किरणहरू सबै दिशाबाट पृथ्वीमा वर्षिरहेका छन । अन्तरिक्ष किरण पृथ्वीमा वर्षिदा वायुमण्डलसंग ठोक्किन पुग्छ र त्यहाँ अत्यन्त शक्तिशाली ऊर्जाको निर्माण हुन्छ । यो ऊर्जालाई प्राथमिक अन्तरिक्ष किरण भनिन्छ ।
अन्तरिक्ष किरण जब वायुमण्डलसंग ठोक्किन पुग्छ तब यस किरणमा रहेको तिव्र गतिमानको न्युट्रोनलाई वायुमण्डलमा रहेका केही नाइट्रोजन परमाणुले अत्यधिक तेज गतिमा अवशेषित (आफु संग मिलाउने काम ) गर्छन । न्युट्रोनको अवशेषबाट नाइट्रोजन परमाणुभित्रको एक प्रोटोन उछिट्टिएर बाहिर निस्कन्छ । एउटा प्रोटोन गुमाउने र एउटा न्युट्रोन प्राप्त गर्ने गर्दा पहिलेको नाइट्रोजन परमाणु अब ८ वटा न्युट्रोन भएको कार्बन परमाणुको आइसोटपमा परिणत हुन्छ । किनकि परमाणुभित्रको प्रोटोन संख्याले नै कुन तत्व हो भन्ने कुरो निर्धारण हुन्छ ।
नाइट्रोजन परमाणुमा ७ वटा प्रोटोन हुन्छ । जब यसले एउटा प्रोटोन गुमाउछ तब यो ६ वटा प्रोटोन भएको कार्बन तत्वमा बदलिन्छ । साधारण कार्बनको नाभिकमा ६ वटा प्रोटोन र ६ वटा न्युट्रोन हुन्छ । तर अन्तरिक्ष किरणको कारणले नाइट्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुमा बदलिदा यसमा ६ वटा प्रोटोन र ८ वटा न्युट्रोन रहन गएको हुन्छ । त्यसैले यो कार्बनको आइसोटप हो । र यसले लगातार रेडियो विकिरण छर्ने भएकाले यसलाई रेडियो कार्बन भनियो ।
वायुमण्डलमा रेडियो कार्बनको मात्रा साह्रै थोरै रहेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुमानमा, साधारण कार्बन परमाणुको संख्या १० अरब हुन्छ भने रेडियो कार्बनको परमाणुको संख्या एक मात्र रहेको हुन्छ । तै पनि पृथ्वीको वायुमण्डलमा सधैँ करिब १०० टन रेडियो कार्बन रहेको हुन्छ ।
मानवको गर्भाधरणदेखी मृत्युसम्मका विभिन्न नामहरू के...
जीवावशेषको आयु कसरी पत्ता लगाइन्छ ?
चलचित्रहरुमा दोहोरो भूमिका (डबल पार्ट) कसरी देखाइन...
नाइट्रस अक्साइडलाई किन लाफिङ्ग ग्यास भनिन्छ ?